Ukukhuphuka Kwezikhangiso Zomdabu Nezenhlalo | Martech Zone
Ukukhuphuka Kwezikhangiso Zomdabu Nezenhlalo
NgoLwesithathu, Januwari 15, 2014 UKelsey Cox
Ngokwanda okukhulayo kwama-smartphones, abantu abaningi basebenzisa amadivayisi wabo weselula ukubheka ama-akhawunti abo ezenhlalo kunama-desktops abo. Abathengisi abahlakaniphile basebenzisa lolu shintsho ngokwandisa imali abayisebenzisayo ekukhangiseni ngamaselula, futhi bahlanganisa izikhangiso zabo ngaphandle komthungo ekuphakelweni komphakathi kwezethameli zabo ngokukhangisa komdabu.
E-US ngonyaka odlule, kwasetshenziswa imali engaphezulu kwama- $ 4.6 billion ekukhangiseni ezinkundleni zokuxhumana, ama-35% awo kwakuyizikhangiso zomdabu zomphakathi. Kubikezelwa ukuthi ngo-2017, lesi sibalo sizokwenyuka size sifike cishe ku- $ 11 billion, kanti ukukhangisa komdabu komphakathi kubandakanya u-58% wenkcitho. Esikhathini esizayo esiseduze kakhulu, ama-ejensi angama-66%, kanye nabathengisi abangama-65%, bathe kungenzeka ukuthi basebenzise imali ethile ekukhangiseni komdabu engxenyeni yesibili yonyaka.
Ngo-2014, abathengisi kanye nama-ejensi nabo bazobe besebenzisa imali yabo yezikhangiso kuyo yonke imithombo yezindaba. Iningi lizokhulisa imali ekusetshenzisweni kwamaselula, imithombo yezokuxhumana, nokukhangisa ngedijithali, kuyilapho izintambo zekhebula, ukusakaza, umagazini, kanye nezwe kuzobona ukwehla okukhulu.
Phew, leyo idatha ebucayi, eh? Ngenhlanhla, LinkedIn iphula lezi zibalo kanye nezibikezelo phansi kokubonakalayo okusebenziseka ngezansi. Njengoba wenza futhi ulungisa izabelomali zakho zonyaka, qiniseka ukuthi ubhekelela lezi zinhlelo namaqhinga.
Tags: ukukhangisaIdathainfographicukukhangisa okuhambayoUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiumdabuukukhangisa kwendabukoukukhangisa komphakathiSocial Media Marketing
5 Social Media Marketing Izibikezelo for 2014
Uyacelwa ukuthi ungaweli i-SEO Email SPAM
Okthoba 30, 2017 ngo-2: 37 AM
Hlobo luni lwezinhlelo zokusebenza zezokuxhumana ezisezweni?